Adopt Me – Page 10 – Petunity
Adopted!! Xx သားသားယုန်ကလေး Macaroon မွေးစားပေးဖို့သူ ရှာနေပါတယ်။ အခုပိုင်ရှင်အိမ်မှာ တခြားယုန်ကလေးတွေနဲ့မတည့်ကြလို့ပါ။ "ယုန်မွေးဖူးတဲ့သူဆိုပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ကလေးကိုသေချာဂရုစိုက်မဲ့လူလက်ထဲထည့်ပေးချင်ပါတယ်။" တကယ်ယုန်လေးတွေချစ်ပြီး မွေးစားမယ်ဆို ပက်ယူနတီ cb ကိုလာခဲ့ပေးပါနော်။ ❤️🐰 (English)4months old Macaroon is looking foraforever home since...
Cat Family in Nay Pyi Taw
Adopt Me Xx နေပြည်တော်က ကြောင်လေးမိသားစု (ကြောင်မေမေနဲ့သားသမီးများ)မွေးစားခံရဖို့ အိမ်ရှာနေပါတယ်။ ပိုင်ရှင်က နေပြည်တော်ကနေ ဧပြီလအကုန်ပြောင်းရတော့မှာမို့ပါ။ ကလေးတွေကိုကော မေမေကိုကော မွေးစားပေးနိုင်ရင် ကောင်းမှာပါပဲရှင်။ အသက် ၃ နှစ်ကြောင်မေမေ ၂ လသား သားငယ်လေး ၁ ကောင်၊ မီးမီးလေး ၂ ကောင် ၆ လ သမီးလေးပိစိ တို့ဖြစ်ပါတယ်။...
Adopted! သည်မီးညောင်လေးတွေက ဘုရားမှာ လာရောက်စွန့်ပစ်ခံထားရတာပါ။ ဂေါပကကလည်း မီးညောင်လေးတွေ ဘုရားမှာရှိနေတာ သိပ်မကြိုက်ကြလို့ မွေးစားမယ့်သူရှိရင်တော့ အရမ်းကောင်းမှာပါပဲ။ သူတို့ကအခုမှ အသက် ၂ လ လောက်ပဲ ရှိသေးတော့ ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုနေလို့ပါနော်။ကြောင်လေးတွေအကုန်လုံးကို အတူတူမွေးစေချင်ပေမယ့် တစ်ကောင်၊ နှစ်ကောင်ချင်း ယူမယ်ဆိုလည်း ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာမှာပါနော်။အထီးလေး ၂ကောင်၊ အမလေး ၂ ကောင်ပါ။[Unicode]သညျမီးညောငျလေးတှကေ ဘုရားမှာ လာရောကျစှနျ့ပဈခံထားရတာပါ။ ဂေါပကကလညျး မီးညောငျလေးတှေ...
Looking foraforever home withagarden ideally! Comment or pm us if you'd like to giveahome.
ooking foraforever home! Comment or pm us if you'd like to giveahome.
Name: Mee Mee Age:3months Looking foraforever home! Comment or pm us if you're interested!
Cutie, Black & Double
Please #AdoptMe!My name is Bo Bo, I'm notapuppy, I'malittle old but I have good personalities like confidence, looking good, friendliness and am good at working as...